Awesome Oscillator Cloud Forex Ukuhweba Isu | Forex MT4 Izinkomba
Ikhaya Forex Strategies Awesome Oscillator Cloud Forex Ukuhweba Isu
Imakethe ye-forex ingenye yezimakethe ezineziyaluyalu kakhulu ekuhwebeni. Abathengisi abasha abazongena ekhanda kuqala ukuhweba i-forex bazothola ngokushesha ukuthi ukuhweba kule makethe akulula njengoba becabanga. Imakethe ye-forex ivame ukuba nesiphithiphithi kakhulu. Ihamba ngokungahambi kahle iye phezulu naphansi eshadini ngokubonakala sengathi ayikho inkomba ecacile. Kepha njalo ngezikhathi ezithile, imakethe ye forex izoletha ithuba. Imakethe izokhombisa izimpawu ezilungele ukuhlangana noma ukutshuza. Lokhu kuhamba kuvame ukuholela kumathrendi angahlala isikhathi eside ngokwanele ukuba abathengisi bazuze kakhulu kunalokho abazobe bebeka engcupheni. Nokho, esweni elingaqeqeshiwe, lezi zinkomba zomkhuba ozayo kunzima kakhulu ukuziqonda.
Kunezindlela eziningi zokunquma ukuthi imakethe isizokwanda. Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokulindela ukuthambekela ukukhomba ukuhlangana. I-Awesome Oscillator Cloud Forex Trading Strategy isiza abathengisi ukuthi babone ukuhlangana okunamathuba aphezulu okuholela kuthambekele phambili.
2 Ichimoku Cloud - Kumo
4.3 Indlela ukufaka Awesome Oscillator Cloud Forex Ukuhweba Isu?
The Oscillator Awesome is a momentum based oscillating indicator which is used to supension trend direction.
Umqondo wale nkomba ulula, noma kunjalo yize ilula, kuyasebenza kakhulu. Ihlanganisela umehluko phakathi kwezilinganiso ezimbili ezilula zokuhamba (SMA). Nokho, isilinganiso sokuhamba asifakwanga ngekhompiyutha ngokususelwa ekuvaleni kwekhandlela kepha kunalokho kuphakathi kwaso. Umehluko phakathi kwezilinganiso ezihambayo bese uhlelwa njengebha ye-histogram efasiteleni elihlukile. Amabha we-histogram akhombisayo akhombisa ukuthambekela kwe-bullish ngenkathi amabha we-histogram amabi akhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Inkomba yesikhathi esifushane kungaba ukukhuphuka nokuwa kwama-histograms. Lokhu kuyasiza lapho uzama ukukhomba iziqongo nemikhombe ikakhulukazi lapho uhweba okwehlukile.
Ichimoku Cloud - Kumo
Inkomba ye-Ichimoku Cloud iyinkomba yezobuchwepheshe esetshenziselwa ukucacisa ukuqondiswa kwesitayela ngokuya ngomfutho. Inquma isikhathi esifushane, ukuthambekela kwaphakathi naphakathi nesikhathi eside konke ngasikhathi sinye ngokuya ngezilinganiso ezahlukahlukene zokuhamba eziguqukayo nezenzo zamanani. Inemigqa emihlanu isiyonke.
IChikou Span noma iLagging Span empeleni inguhlobo olusalela emuva lwezenzo zamanani. Kuhloselwe ukwenza intengo yesenzo ngokuya ngokuvalwa kwekhandlela ngalinye, ngenkathi kuklanywa ibanga elithile ngemuva kwaso. I-Tenkan-sen noma i-Conversion Line imaphakathi elihambayo elisuselwa kumaphakathi lekhandlela ngalinye futhi limelela ukuthambekela kwesikhashana. I-Kijun-sen imele ukuthambekela kwaphakathi nonyaka futhi futhi isuselwa kumaphakathi lekhandlela ngalinye isikhathi eside. I-Senkou Span A noma i-Leading Span A imaphakathi ne-Tenkan-sen ne-Kijun-sen ngenkathi i-Senkou Span B i-median isikhathi eside futhi icatshangelwa ngaphambi kwentengo yamanani.
IKumo noma ifu lakhiwe yiSenkou Span A neSenkou Span B, futhi imele ukuthambekela kwesikhathi eside. Umkhuba wesikhathi eside unqunywa ngokususelwa endaweni yeSenkou Span A maqondana neSenkou Span B. Uma iSenkou Span A ingaphezulu kweSenkou Span B, imakethe ibhekwa njenge-bullish. Uma ifakwa ngokungafani, khona-ke imakethe ibhekwa njenge-bearish. Umkhuba wesikhathi eside uthathwa njengobuyiselwe emuva noma nini lapho imigqa emibili iwela.
I-Awesome Oscillator Cloud Forex Trading Strategy isuselwe ekuhlanganeni kwe-Awesome Oscillator kanye neKumo yenkomba ye-Ichimoku Cloud. Lezi zinkomba zisuselwa kuma-crossovers ezilinganiso ezihambayo ezisuselwa kumaphakathi futhi zimelela ukuthambekela kwesikhathi eside.
Yize lezi zinkomba zokungena zingavami ukuhlangana, izimpawu ezenzeka eduze komunye nomunye zivame ukuba namathuba aphezulu okuholela kuthrendi.
Izimpawu zokuhweba zisuselwa ekuweleni ngaphezulu kwama-histograms we-Awesome Oscillator phakathi kwe-midline kanye nokuwela kolayini beKumo.
Ubude besikhathi: 4-ihora namashadi nsuku zonke
Ukuhweba Session: Tokyo, ILondon neNew York
I-Senkou Span A kufanele iwele ngenhla kwe-Senkou Span B ekhombisa i-bullish yesikhathi eside yomkhuba esuselwa ku-Kumo
Ama-histograms we-Awesome Oscillator kufanele awele ngaphezu kwe-midline ekhombisa ukuthambekela kwe-bullish
Lezi zimpawu zokungena kufanele zenzeke ngandlela thile
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho ama-histograms eba mbi
I-Senkou Span A kufanele yeqe ngezansi kwe-Senkou Span B ekhombisa i-bearish yesikhathi eside yomkhuba esuselwa ku-Kumo
Ama-histograms we-Awesome Oscillator kufanele awele ngaphansi kwe-midline ekhombisa ukuthambekela kwe-bearish
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho ama-histograms eba muhle
Lelisu lokuhweba isu lesikhathi eside lokuhweba ngamasu. Kanjalo, kuhloselwe ukuhweba ngokuhweba kwesikhathi eside okuvame ukuholela ekuzuzeni okukhulu ngokususelwa kuma-pips. Abahwebi bangabamba ukuhweba isikhathi eside ukuhweba ngokuya ngaleli qhinga. Ukuhweba kungabanjwa izinsuku ezimbalwa ukuvumela imakethe ukuthi ithambekele kuma-pips amaningana.
Abahwebi abazosebenzisa leli qhinga kufanele balihlanganise namakhono amahle kakhulu okuphatha ezohwebo. Kufanele bafunde ukuhambisa ukulahleka kokuma ukuze bakophule ngesikhathi esifanele bese bekulandelela ebangeni elifanele.
Kuzoba nezimo lapho isignali yokuguqula i-Awesome Oscillator izokwenzeka ngemuva kwesikhathi kunalokho okwenziwe intengo. Ukuze ukhokhele lokhu, abathengisi bangakhetha ukuvala ukuhweba ngokushesha nje lapho kuvalwa ikhandlela ngaphakathi kweKumo (Amafu).
Lelisu isu lokusebenza elisebenzayo elinganikeza izinzuzo ezizinzile uma zisetshenziswe kahle.
Awesome Oscillator Cloud Forex Trading Strategy is a combination of Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) futhi ithempulethi.
Awesome Oscillator Cloud Forex Trading Strategy inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka Awesome Oscillator Cloud Forex Ukuhweba Isu?
Thwebula Awesome Oscillator Cloud Forex Trading Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha Awesome Oscillator Cloud Forex Ukuhweba Isu
Uzobona Awesome Oscillator Cloud Forex Ukuhweba Isu iyatholakala kwi Ishadi yakho
Isiqephu esedluleSR Rate HTF MT5 Indicator
Isiqephu esilandelayoTime Bar Custom Monthly MT5 Indicator
Forex MT5 Izinkomba4019